Azoko atao ve ny manatsara ny lisitry ny lisitry ny Amazon ao amin'ny teny fanalahidy izay manosika ny tenako ho any amin'ny topanao?
Raha te-hametraka ny tenanao ho amin'ny fahombiazana ianao dia tokony hametraka sy hanatsara ny lisitra Amazon anao amin'ny teny fototra fototra (i. f. , ireo teny fanalahidy tokana sy ireo tsikombakomba lava izay ampiasaina indrindra amin'ny fikarohana finday). Fa ahoana ny fomba ahitanao ny teny fanalahidy marina sy manatsara kokoa ny fomba amam-panaovan'i Amazon amin'ny fomba tsara indrindra? Ny zavatra dia mitovy amin'ny Search Engine Optimization (SEO), mba hanatsarana ny lisitry Amazon anao dia tokony hifidy ny teny fanalahidy amin'ny fangatahana karoka be indrindra (i. f. , volavolan-dahatsoratra lehibe), mifanaraka amin'ny fifaninanana manan-danja amin'ny tenimiafina (i - obtener informacion de un dominion. f. , mora mora ny mandrindra). Izany no antony tokony hifidiananao ny fitaovana maoderina maoderina. Ary etsy ambany dia hasehoko anao ny soso-kevitra sasantsasany ho anao mba hanatsarana ny lisitry ny Amazon ho an'ny teny fanalahidy marina sy ny fampiasana fitaovana mety amin'ny fahombiazan'ny fahombiazana. Noho izany, andeha isika handroso!
Manomboka amin'ny Google Keyword Planner
Tena mahagaga, ity fahalalana fototra fototra ity dia fitaovana fikarohana amin'ny ankamaroan'ny SEOs manam-pahaizana dia afaka hanampy anao hanatsara kokoa ny lisitra Amazon ho an'ny teny fanalahidy marina. Raha tokony ho marimaritra kokoa, manoro hevitra aho amin'ny fampiasana ny tenimiafina eo amin'ny Google eo alohan'ny zavatra hafa - raha te hanana sary lehibe amin'ny teny fanalahidy vokarinao sy ireo andian-teny lava fohy. Amin'izany fomba izany, dia ho afaka hahatakatra ny fironana rehetra manerantany momba ny fampiasana azy ireo ianao - tsy amin'ny Amazon afa-tsy ihany, fa amin'ny alalan'ny tsena hafa mitovy amin'izany, toy ny eBay, Walmart, Alibaba, sns.
Fanatsarana ny Lisitry ny Amazon amin'ny fampiasana fitaovana matihanina
Raha vao mahita sarimihetsika lehibe amin'ny teny fototra tianao ianao, fotoana izao mba hitsapana azy ireo amin'ny hetsika. Midika izany eto fa tsy maintsy mividy fitaovana fikarohana momba ny sokajy tsara ianao manokana amin'ny fampivoarana ny lisitra Amazon. Amin'ireo hafa, azoko atao ny manoro hevitra ireto manaraka ireto - KeywordTool. io sy JungleScout. Nofiniko izy ireo mba hanatsara ny lisitry ny tenako Amazona ho an'ny teny fototra fototra ifandaharana. Ireto ambany ireto dia misy fijery fohy momba ny tsirairay amin'izy ireo.
Izany dia fitaovana lehibe hanohizana ny fiovana amin'ny hevitra sasantsasany manan-danja. Tahaka ny ao amin'ny Google Keyword Planner, ny zavatra rehetra ilainao dia ny miditra ny teny fanalahidy tianao - ary mahazo fanampiana amin'ny lisitry ny teny fikarohana mifandraika amin'ny fampiasana ny mpivarotra velona mitady ny singa iray na ny sokajy ho an'ny vokatra. Inona ihany koa - KeywordTool. io dia toa tena lehibe tokoa, indrindra rehefa tonga amin'ny fametrahana ny teny fampanantenana manan-danja indrindra amin'ny teny fanalahidy. Tsarovy, ny safidin-tsakafo Amazonia tsy afaka manampy anao foana amin'ireo endri-tsoratra ireo, izany no mahatonga ny fampiasana ity sokajy fikarohana manan-danja manokana ity ho lasa famonjena ho an'ny mpivarotra entana rehetra amin'ny Amazon.
Ary eto izahay dia tonga eo amin'ny teboka farany - ny zavatra dia ny hoe na Keyword Planner, na KeywordTool dia tena manampy tokoa ny mahatakatra ny zava-dehibe indrindra eo - dia mety hahatonga anao hivarotra bebe kokoa amin'ny Amazon. Izany no antony anoratako ny fampiasana ny JungleScout mba hamantarana ny fandresena ny teny fototra sasantsasany, na ny fiteny lava be dia be. Na azonao ampiasaina ihany koa izany ho an'ny fanovàna mifandimby. Farany, hanao ny fanamarinana farany ho an'ny teny filamatra azo antoka rehetra, ary hahatsapa raha toa ka tsy maintsy handresy ny lisitra Amazon raha azo antoka, sa tsy izany mihitsy.